China emeputa na ulo oru China Ngwongwo Egwuregwu Haiber
Egwuregwu ole na ole pụrụ iche dị ka ịrị ugwu ugwu, na-azụ akwara niile na ngbanwe nke ahụ gị, na omume nke iche echiche oge niile maka usoro gị. Mana akụkụ kachasị mma bụ na onye ọ bụla na-amalite n'ụzọ ebumpụta ụwa, na ụdọ ọkachamara na-echebe ya, na ị chọghị ọzụzụ ọzọ iji nwee ntụrụndụ nke gị.
Ogwu na-atọ ụtọ bụ mgbidi na-eme ihe ngagharị nke na-eme ma ụmụaka ma ndị okenye ihe ịma aka nke ịrịgo na ihe egwuregwu. Fulcha mara mma ma dị omimi, ha na-akpọbata ndị sonyere na ụwa nwere nnukwu ụlọ elu oge gara aga, labyrinth, beanstalks, webi ududo, anwụrụ anwụ gbara agba na ọtụtụ ndị ọzọ. Limrị elu na -eweta echiche nke nguzozi, ịdị ọcha na obi ike, mana akụkụ kachasị mma na ya bụ na ọ na-abịara onye ọ bụla. Ndị otu nọ n’okpuru Windo Fun n’ịchịkọta uru ndị a na uto nke ịrị elu ụwa, ma hapụta usoro ịma aka dị iche iche. Ha emeela ka ihe ntụrụndụ nke sonyere ntụrụndụ ndị na-arụ ọrụ ma na-adọta ọha mmadụ buru ibu site na ịchọghị ọzụzụ ọ bụla ma ọ bụ ọzụzụ ọ bụla.
Mgbidi ịrị ugwu nke Haiber bụ mgbidi ịrị elu na-emekọrịta ihe na-emetụ ma ụmụaka ma ndị okenye n'ihe ịma aka nke ịrịgo na ihe egwuregwu. Fulcha mara mma ma dị omimi, ha na-akpọbata ndị sonyere na ụwa nwere nnukwu ụlọ elu oge gara aga, labyrinth, beanstalks, webi ududo, anwụrụ anwụ gbara agba na ọtụtụ ndị ọzọ.
3D Mgbago Ugbo
Ulo elu igwe anyi nke 3D na arigoro n’iile ohuru. Site na ihe mmekorita dịka ọkụ ikanam, njigide na-agagharị, oge, akara aka na bọtịnụ, mgbidi ọ bụla na-egosipụta oke obi ụtọ!
Mmekorita ya na mmekorita nke ihe
Otutu otutu ihe
Cartoon Fun Wones
Winggba Wgba Maka Funtọ
Ihe ma Aka Pụrụ Iche
Nke gara aga: Agụm ụdọ
Osote: Nnukwu FEC-001
TRUBLUE SPUTED AUTO BELAY
Were belay akachasị eji na ụwa niile, tinye mgbakwunye ọsọ ọsọ, ị ga-enweta TRUBLUE SPEED Auto Belay.
Ọ na-enye otu ntụkwasị obi na ezigbo aha dị ka TRUBLUE Auto Belay mana emere ya kpọmkwem maka asọmpi ịrị ugwu ọsọ na ọzụzụ. Mgbapụta ngwa ngwa dị ngwa ngwa karịa nke ndị oke ụwa na-efe efe, na ndọta ndọta anyị na-eme ka amara usoro dị omimi nke TRUBLUE ama ama.
MM MAKA MAGNETIC BRAKING
Ọ bụ otu ihe akpọrọ akpọki akpọrọ akpọki braki nke ndị na-arị elu ahụ hụrụ n'anya n'ihi agbụrụ dị nro.
AMEM RELAKA MAKA LM &AKA MAKA LM &AKA
Igwe eji ndọta akpọrọ ikuku emegharịghị mgbagha anaghị akwụ ụgwọ na enweghị akụkụ ịchụ àjà dị na sistem braking, yabụ na ngwaọrụ anyị nwere ntụkwasị obi na arụmọrụ dị ala.
AKW REKWỌ EGO
TRUBLUE SPEED Auto Belay na-akpọghachi azụ na 2.7 sekọnd maka mgbidi 10m na ​​3.5 sekọnd maka mgbidi 15m, nke ga-agbaso ụkpụrụ IFSC ma dịkwa ngwa ngwa maka ndekọ ụwa na nke ugbu a.
WIDEST RANGE RIDER WEIGHTS
Ihe njiri mara nke TRUBLUE na-anabatabeghị ike nke ngwaọrụ ọ bụla n'ahịa, site na 10 ruo 150 n'arọ (22-330 lbs).
N'ihe dị ka usoro IFSC, TRUBLUE SPEED Auto Belay na-akpa ike dị ala n’elu onye na-arị ugwu, yabụ nsonaazụ niile bụ nke gị.
Akụkụ: 37 x 33 x 23 cm (15 x 13 x 9 na)
Ikike ngwaọrụ: 18.5 n'arọ (40.8 lbs)
Ike n'ọrụ: 10 ruo 150 n'arọ (22 ruo 330 lbs)
Speedgba Ọsọ Dị Mkpa: 2 m / s
Oge nloghachi (15m): 3,5 elekere
GT Sit na-anọchite anya nzọụkwụ na-aga n'ihu na nkasi obi maka ndị ọrụ ịnweta ụdọ. O meputara udiri egwu a site na nchoputa nke usoro nyocha SOSPESI nke nyere anyi nghọta ohuru banyere mmachi nkwusioru ya. Njikọ ohuru n’agbata eriri ukwu yana ukwu na-eme ka GT Sit nọrọ jụụ ma n’oge nkwụchi na n’elu ala. Okike ahụ na-eji ahụrịrị siri ike na nke siri ike agbanwe iji nye nkwado na nkasi obi kwesịrị ekwesị maka akụkụ niile nke ahụ. Ejiri ihe ntinye a na-enweta na ya nwere oghere abụọ, otu maka ịtinye ụbọchi obi na onye na-emechi obi na nke ọzọ maka ijikọ ube, ndị njem na ngwa ọzọ. Kwadoro STS akpaka akpachi na ukwu ụkwụ.
Akụkụ mgbakwunye alumini anọ: 1 ventral maka nkwusioru, akụkụ abụọ maka itinye, yana azụ 1.
Ezubere maka ijiri ya na GT Chest, nke nwere ihe mgbakwunye abụọ (otu ihu na azụ), maka njigide njide nke ozu zuru oke.
(Tụọ ya akwa na akwa [aka Coveralls / jaket] Ọ BmentsGH measure ịha akwa gị)
Oke: 1 / SL
Oke dị: 80-120cm (31.5 - 47.2 sentimita)
Ogo ụkwụ: 50-65m (19.7 - 25.6 sentimita)
Asambodo: EN 358 EN 813 (O dighi ANSI)
Ibu ibu: 1200 g (2.65 pound)